Ndiyakuvuyela iPasika: mfutshane, kwivesi kunye neprose. Ndiyakuvuyela-imifanekiso yePasika
I-Easter ekhanyayo kaKristu ngenye yeeholide ezibalulekileyo zamaKristu emhlabeni jikelele. Ukuqala kwePasika kulandelwa yiNtente eNkulu, ngexesha apho umphefumlo nomzimba womntu uhlambulukileyo. Iimpawu zePasika ziintaka ze-Easter kunye namaqanda e-Easter, aphethwe ngeveki eyingcwele-iveki yokugqibela ngaphambi kweMthendeleko enkulu yovuko lukaKristu. Ngobusuku ukususela ngoMgqibelo ukuya kwiSonto kuqala inkonzo yovuyo lukaThixo kunye nomdaniso, emva koko abathembekileyo baya ekhaya kunye neebhasikidi ezingcwalisiweyo - ukuphuka ngokukhawuleza. Ngokwesiko, ngexesha lokutya, bayatshintshisana ngePasika, befuna ukuba omnye nomnye abe nolonwabo. Kukhethwa kwethu uza kufumana intlonelo ngakumbi ngePasika, eya kuphelisa umphefumlo kwaye iza kukhunjulwa ixesha elide zizihlobo kunye nabahlobo. Ukuqwalasela, mfutshane kakhulu ngePasika kwivesi kunye neprose, kunye nemifanekiso emihle enokuthunyelwa kwi-fowuni kunye ne-imeyile kumhlobo okanye osebenza naye emsebenzini.
Mfutshane mfutshane ngenyameko ngeendinyana ze-Easter 2016
NgeSonto elikhanyayo, i-atmospheric and happy atmosphere ivakalelwa ngakumbi. Ngaloo mini, ngenxa yoMsindisi, uluntu lusinqobe ekukhunjweni ebukhosini bukaMtyholi kunye nokunikezelwa kobomi obungunaphakade. Izihlobo kunye nabahlobo bakho baya kuvuya ukuva kuwe ubumnandi bumnandi kwiPasika okanye ukufumana i-SMS emifutshane kunye neyona nto ifuna ukuchuma kunye nolonwabo.
Izibhengezo zangaphambili kunye nePasika kwivesi - umhlobo, umhlobo, izalamane
NgePasika kuyisiko lokuphepha ukuxabana kunye nokuxolela ukuhlambalazana okudlulileyo kunyaka owedlule. Ngoko ukuba awukwazi ukuxolelana nomhlobo okanye intombi, thumela umyalezo we-SMS ngobungqina bokuqala kunye nePasika kwivesi. Uthando olunjalo luya kufumana impendulo kumphefumlo womntu othandekayo kuwe. Ukuvuyiswa kwethu ngePasika kuya kuba yinto ephezulu kakhulu kwixesha letheko. UKristu u vukile!
Uvuyisana kakhulu ngePhasika likaKristu ngeprose
Ngoko lo suku olude ulindelwe lifikile - iCawa eBhanya! Xa sele uqokelelwe kwisidlo sePhasika, lixesha lokukhumbula amazwi enomdla ovuyisayo kunye nezifiso. Ngosizo lwethu, unokumangaliswa kwaye ujongane nezihlobo zakho nabahlobo ngokuzinikela ngokuncoma kakhulu ngePasika kwiprose. Kwangathi le mini ingaba ngumqalo wobomi obutsha-ngoxolo nolonwabo!
Ukunconywa ngePasika kwimifanekiso
Ngomhla wePasika, umncedisi uhlala enenkathazo eninzi - uhlambulule indlu, uhlambe, ugubungele itafile yeholide. Nangona kunjalo, kuthatha ixesha elincinane ukulungiselela ukunyanzela ngePasika kwizihlobo zakho nakwiintsapho.
Imifanekiso emihle yePasika 2016
Sincoma ukumangaliswa kwaye nceda ujonge umngane okanye intombi yakho ngokumhalalisa ngePasika ngendlela yomfanekiso onokufakelwa kwi desktop kwikhompyutha. Lapha uza kufumana imifanekiso yasekuqaleni ebonisa amaqebelengwane namaqanda e-Orthodox ama-Orthodox, kunye neempawu zePasika yamaKatolika-umvundla okanye intonga. Makhe imifanekiso enhle ibe yiindaba ezilungileyo kunye ezilula!
I-Easter yinto eqaqambileyo neyintsikelelo, apho ukunyaniseka kukuvakalelwa ngakumbi. Ukuvuyisana ngePasika kuzisa ubabalo kunye novuyo, ngoko kubaluleke kakhulu ukwabelana ngemvakalelo emihle kunye nabathandekayo. Ungakwazi ukuthabatha naluphi na uvuyo ngePasika - i-SMS emfutshane, kwivesi kunye neprose, kunye nemifanekiso ehlekisayo - umhlobo okanye intombi uyakuvuyela lo mqondiso wokuqwalasela kuwe. Nika okuhle kwaye uKristu Uvukile!
Iingoma zoSuku lukaMama: abantwana, abadala, namhlanje banamhlanje. Amazwi kunye namazwi avela kwintombi malunga nonina
Iingoma kunye neengqungquthela ze-Shrove NgoLwesibili ziingoma ezihlekisayo zabantwana kunye nabantu abadala, ingoma kunye nomculo. Iimbongo zezingane kunye neengqungquthela zeeveki zePancake kunye nokuxolelwa ngeCawa
Ngowuphi usuku uSabantuy abhiyozelwa ngo-2016? Ndiyakuvuyela uSabantuy kwivesi
Ndiyakuhalalisela ngomhla we-akhawunti-into enhle kwaye ehlekisayo, kwiprose nevesi. Lungiselela ukunyanzela okulungileyo kwi-akhawunti yomphathi weqela, oogxa bamadoda nabasetyhini
Indlela yokomeleza izipikili ezinobunzima neentle
Ukunyamekela "i-Milky" kwesikhumba sakho
Imithi yeKrismesi imithi ngezandla zabo: Iibhola zeKrisimesi ezenziwe ngephepha kunye nentambo
Ubunzima bezinwele zaseNdiya: iipropati kunye neendlela zokupheka
Izindlela zeNdabuko zokunyanga
Kutheni inja efile iphupha?
Izilwanyana zezilwanyana zezintso
I-Buckwheat zrazy ne-cottage cheese